Download Getaway  HDRip XViD [699MB]+EngSrt[87KB]+Direct Download Link - အမျိုးကောင်းသား
Home » Movie » Download Getaway  HDRip XViD [699MB]+EngSrt[87KB]+Direct Download Link
Download Getaway  HDRip XViD [699MB]+EngSrt[87KB]+Direct Download Link
Action ကားလေးလာပါပြီ... Getaway 2013 HDRip ပါ... ပြိုင်ကားဆရာ Brent Magna တစ်ယောက် သူ့ရဲ့မိန်းမကို villain ရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတော့.. Villain ရဲ့ခိုင်းစေချက်အရ စက္ကန့်နဲ့ အမျှ အချိန်မနှောင်းခင် High Speed မောင်းပြီး ပြန်လိုက်ကယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ..
ကလေးနေရာကတော့ Selena Gomez ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်.. ပြိုင်ကားကြိုက် ကိုကိုများ အကြိုက်တွေ့ မဲ့ Movie ပဲဖြစ်ပါတယ်.. Quality အတွက် Screenshot ပြပေးထားပါတယ်.. Movie နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ Subtitle ကိုလည်း ရှာဖွေထည့်ပေးထားပါတယ်.. Download လုပ်ရလွယ်ကူအောင် Direct Download Link လည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်.. Online Streaming ကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်လဲ Billion Upload ကို ရွေးပြီး ကြည့်လို့ ရပါတယ်.. ကဲ ဘာလိုသေးလဲဗျာ ......
အောက်မှာ Download ပြုလုပ်လို့ရပါပြီ.....
Format: avi , size: 699MB
Vido Codec : XviD , Audio Codec: mp3 @ 128kbp/s
Resolution: 640×272 , Accept Ratio : 2.35:1
[Download Link သေ ၊ မသေ သိရန် အောက်က ပုံ ကို Click ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ New Tap ဖွင့်သွား ပြီး Webpage အသစ် ပေါ်လာရမည်။ အကယ်လို့ webpage မပွင့်လျှင် File Not Found ဖြစ်သွား တဲ့ အတွက် အခြား Mirror ကနေ ဒေါင်းပါ။ New Tap ပွင့်တယ်ဆိုရင် တော့ ပေါ်နေတဲ့ Webpage ကို ပိတ်ပစ်ပြီး Download Eng.srt(87KB) Now Button ကို နှိပ်ပြီး အောက်မှ ပေါ်လာသော Table မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Download Links များမှ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်]
Download Eng.srt(87KB) Now
Direct Download Download Direct OK Until 2013/11/20
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 5:28:00 PM